बलिउडका कसैलाई पनि निम्तो छैन प्रियंका र निकको विवाहमा ! - Everest Dainik - News from Nepal
बलिउडका कसैलाई पनि निम्तो छैन प्रियंका र निकको विवाहमा !
एजेन्सी । बलिउडकी चर्चित नायिका प्रियंका चोपडा र अमेरिकी गायक निक जोनसको यही डिसेम्बर दुई तारिखमा विवाह हुँदैछ । विवाहमा कोकोलाई निमन्त्रणा होला ? अलि रुचिको विषय हुनसक्छ ।
उनी चलचित्र क्षेत्रकी चर्चित नायिका भएकाले चलचित्र सम्बन्धित व्यक्ति नै विवाहमा बढी होलान् । तर, अचम्म उनको विवाहमा चलचित्र क्षेत्रका कसैलाई पनि उपस्थितको लागि निम्तो दिइएको छैन ।
याे पनि पढ्नुस प्रियंका र निक विवाहको तयारीका लागि राजस्थानमा
पिंकभिल्लाको एक रिपोर्ट अनुसार प्रियंका र निकको विवाह निकै नजिकका साथी र आफन्तका बीचमा निकै गोप्य तरिकाले गरिने बताइएको छ । उनीहरुको विवाहमा बलिउडका कसैलाई पनि आमन्त्रण नगरिएको रिपोर्टमा दाबी गरिएको छ ।
प्रियंका र निकको विवाह जोधपुरस्थित उमैद भवन प्यालेस होटलमा हुने बताइएको छ भने विवाह अघि आयोजना गरिने संगीतलगायतका कार्यक्रम नोभेम्बर ३० र डिसेम्बर एक तारिखमा मेहरानगर फर्टमा हुनेछ ।
याे पनि पढ्नुस अमेरिकन बुहारी बनिन प्रियंका, १० वर्ष कान्छा निकसँग विहे !
ट्याग्स: Marriage Invite, Nik jonas, Pryank Chpada